फेशन परिवर्तन सधैं अनपेक्षित, विशेष गरी फैशन देखिन्छ। thinness को पनि मानक - एक मोडेल - हाल को वर्ष मा थप वजन। कारण anorexia भोगिरहेका को ठूलो रकम गर्न, फैशन शो मा विशेषज्ञहरु झन् जसको वजन सामान्य तल छ मात्र बालिका, छ छान्ने छन्। जसको लागि तिनीहरूले नरक मार्फत जाँदैछन् ती को राय बारेमा भूल गर्न उचित सेक्स को अस्थिर आदर्श को पीछा मा त, वजन त्यहाँ भएकालाई छन् र मानिसहरू। म जस्तै मान्छे गर्न बालिका को पूर्ण हुँ?
पहिले, धेरै पूर्णता को डिग्री मा निर्भर गर्दछ। चिकित्सा वजन भएको भेद र मोटोपना केही डिग्री छन्। हुनत विधि छैन सबै भन्दा राम्रो छ, बीएमआईक्याल्कुलेटर मान द्वारा गणना पूर्णता को डिग्री। त्यसैले मान्छे जस्तै Girls को पूर्ण, तिनीहरूले भने वजन छन् तर मोटे छैन। चिकित्सकीय बोसो को वास्तवमा केटी राम्रो चिल्लो आकार बिगार्छ छैन र यो थप्न 3-5 किलो को "अतिरिक्त", यो एक राउन्ड अनुहार थप प्यारा देखिन्छ। तथापि, लगभग सबैलाई मानिसहरूको benevolent ध्यान बोसो ठूलो को5अतिरिक्त किलो मा सीमाना पार गरेपछि कम हुँदै गईरहेको छ कि लाग्छ।
मान्छे जस्तै Girls पूर्ण, तिनीहरूले अलिकति पोटिलो, तर मोटे हो भने। महिला निरपेक्ष वजन सामान्य माथिल्लो सीमामा पनि हुन, तर धेरै बोसो सक्छ। पश्चिम, यी मान्छे "कलिलो बोसो मानिसहरू।" भनिन्छ सामान्यतया यो जो एक पृष्ठभूमि मा वजन प्राप्त गर्दै पातलो हड्डी मानिसहरूलाई छ कम शारीरिक गतिविधि। गंभीर मांसपेशी तन्तु पर्याप्त बोसो, लाइटर, धेरै छैन, तर। यसको विपरीत, बालिका महिला खेलाडीहरूलाई अक्सर अन्य आदर्श विकल्प मा आदर्श भन्दा भारी छन्। त्यसैले निर्देशित छैन हुन मात्र वजन, अधिक महत्वपूर्ण मात्रा द्वारा।
दोस्रो, मान्छे जस्तै Girls को पूर्ण, यदि पहिलो राम्ररी विकास संचार कौशल। आफ्नो युवावस्थामा, अधिकांश पुरुषहरु खराब महिलाहरु सामना गर्न सक्षम छन्। र माथि कुराकानीमा राख्न सक्षम छ जो एक केटी, बिस्तारै यो मानिसलाई, प्रेरित सक्रिय र सान्त्वना सधैं लोकप्रिय हुनेछ। बोसो मान्छे बढी दयालु र हँसिलो हुन मानिन्छ। तपाईं वजन "सद्गुण" छ भने, फिट गर्ने प्रयास यस स्टेरियोप्रकार।
तेस्रो, मान्छे को धेरै महिलाहरु मा एक राम्रो भोक त्यो एक सम्बन्धमा भावुक छ कि सुझाव भन्छन्। त्यो जीवनको सुख एक रमाइलो गर्न, त्यसपछि यो शायद अर्को न्यायाधीश हुने छैन सक्षम छ भने त्यो छ। तार्किक। र शरीर अब पूर्ण बालिका सेक्स हर्मोन एस्ट्रोजन मा, आफ्नो उत्पादन adipose ऊतक संग सम्बन्धित छ रूपमा, त्यसैले तिनीहरू एक बिट भन्दा बढी महिला दुखाइ कलिलो छन्। मान्छे यो instinctively र कलिलो bitch पीडित पछि अक्सर प्यारा पोटिलो समाज केटी हेर्न।
चौथो, बालिका को पूर्ण अक्सर थप अनुरूप, तिनीहरूले महसुस किनभने छन् आत्म-शङ्का। र यो केही मान्छे यो फाइदा लिन, र तिनीहरूले केही बालिका, यसको लागि दोष गर्नुपर्छ भनेर होइन मोडेल उपस्थिति को अव्यावहारिक भएको मान्छे आदर आशा। सबै princesses लागि पर्याप्त अगुवाहरू। flighty कलिलो, बालिका को पूर्ण पृष्ठभूमि विरुद्ध यति राम्रो कथित छन्। र अक्सर, एक unfashionable आंकडा संग एक केटी खोज्दै सुरुदेखि मान्छे, बस यसलाई उनको लागि सजिलो बनाउन। मान्छे थप लचिलो प्रकृति जस्तै बालिका पूर्ण।
पाँचौं, यस तथ्याङ्कले बाहेक महत्त्वपूर्ण छन् सुविधाहरू। मानिसहरू सिद्धान्त मा, जटिल को अनुहार, परिवर्तन गर्न सकिन्छ, कि आंकडा महसुस। पनि जिम fatties मा उपेक्षा छैन गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे को लागि लिखित पुस्तकहरू मध्ये। आखिर, आज यो बाक्लो छ, र भोलि एक रसीला बलियो शरीर को सौन्दर्य छ। तथापि, कुरूप संग पूरा नै लेखक बेवास्ता गर्न सल्लाह देखिन्छ। उदाहरणबाट यो व्यक्ति पनि महत्त्वपूर्ण छ कि स्पष्ट छ। खैर, पूर्ण अनुहार मा बालिका को धेरै खराब भन्दा राम्रो देखिन्छ। त्यसैले यसलाई वजन लागि समय मा रोक्न आवश्यक छ।
के मान्छे जस्तै Girls को प्रकार? को मान्छे पनि धेरै फरक हुन् किनभने unequivocal जवाफ, कुनै छ। तर यहाँ मात्र पूर्णता को डिग्री द्वारा, बचा गर्ने हुनुपर्छ र पातलो, र बाक्लो मानिसहरू छन्। सायद सतह bouncers र देखि बालिका को पूर्ण सुरक्षा को वजन?
पहिलो नजर मा प्रेम। मिथक वा वास्तविकता?
इन्टरनेटमा एक केटी के भन्न? शुरुआती लागि सुझाव
जाम केक: सरल व्यञ्जनहरु
मान्छे रेस्टुरेन्ट नेटवर्क "पुरानो खाद्यान्न भण्डार", कजान समीक्षा
चीन गणतन्त्र: अर्थव्यवस्था, जनसंख्या, इतिहास
डेल Inspiron 3521: बजेट लागि एक workhorse
राम्रो तरिकाले स्नान को लागि शुरुआती शुरुवातहरु को लागि स्नान - सुझाव
सैन्य commissariat मा एक आत्मकथा कसरी लेख्न। सेना भर्ती कार्यालयमा आत्मकथा: नमूना